Anokanganisa mutadzi Gökmen Tanis akasungwa, zvichida mutambo wemhuri: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 18 March 2019	• 36 Comments
Saka iwe une nzira dzose, iwe une makamera akarembera mukati meguta, munhu wose anokwanisa kuvesdrop kamwe chete, iwe une predictive big data tsanangudzo yekuongorora, asi iwe haugone kuona kusangana kunowanikwa nechiitiko pane zuva rekufambisa kwemazuva ose? Zvadaro iwe unofukura nyaya iyi yose mumutambo mukati mechiito chinotyisa uye zvino kamwe-kamwe mharidzo inoparidzirwa kuti inogona kunge iri pamusoro pokugadzirisa mune zvinyorwa zvoukama. NOS inoshuma [quote] Munguva yezuva racho, zvinyorwa zvakaitwa kubva kune vazivana vomurume uyu, vachiti akanga ane zvinetso zvepfungwa uye kuti pane nyaya yemhuri. Maererano nevamwe, uyo anokanganisa akanga atarisira nguva yake yekare, vamwe vanofunga kuti chinangwa chake chaive nhengo yevamwene vake.
Mune maonero angu, taingofanira kutarisana ne PsyOp yakanyatsogadzirirwa kuti tiongorore matanho ose anotyisa uye kuti tikwanise kuyera kupindura kwevanhu. Takaona mauto emapurisa mumugwagwa waunogona kutora nyika yose! Mukuwedzera, yakanga iri nzira yakanaka yekuzivisa chimwe chinhu chitsva, iko kusanganisa kwakavhiringidzika kwehuwandu hwemagariro evanhu. Izvi zvinogona kuwanikwa mukuti mapurisa akaudza kuti mifananidzo haifaniri kuiswa pane zvekugarisana nevamwe, asi kuburikidza newebsite yavo. Kuziviswa kwepasi rose kweizvi kwakaitika panguva yekurwisa muNew Zealand, sezvinotsanangurwa ichi chinyorwa. Imwe webhusaiti yakatanga zvakare apo iwe unogona kuudza kuti iwe wakachengeteka (ikbenveilig.nl zvakanaka nokuda kwemashoko makuru e data). Panguva ino, mamiriro ehutano hwakasiyana-siyana hunotyisa hunogona kuyerwa zvakanaka. Nenzira iyi vanhu vanogona kutora zvishoma nezvishoma ku "maitiro ekukombwa" uye zvinokwanisika kuongorora kuti vanhu vanogara zvakanaka sei kugara mukati pamutemo 5.
Mapurisa akazviti akatarisa pane imwe nzvimbo yeanopomerwa ne drone. Izvozvowo ndiko kuuya kwechirwere chitsva chatinogona kutotanga kuchinyorera. Vanhu vacho vakakwanisa kufarira mifananidzo yevakuru vane mauto ane simba uye saka mapurisa ose enyika anoyera pazuva re1 akaedzwa zvakakwana. Ndezvipi zvatinogona kutarisira kuiswa kwamatangi mumugwagwa? Aiwa, nokuda kwokuti tinoda zvakanyanya (kunyengedza) kutya, nezvimwe zvombo zvakanyanya!
Iyi nyaya inogona kunge yakakurumidza kuderedzwa mumutambo wemhuri. Munguva iyi, masangano ose ave akaedzwa zvakajeka muzuva re1 uye madzimai uye vatendi vari kuvhara nechikonzero chekuti pane kungove kwakakwirira. Iwe unogona kungoshevedza "nyanzvi yehugandanga" kuti vaite kuti vaite kuti mumwe haaisi mimwe uye kuti jihadists inogona kuendesa kutyisa semugumisiro wekushandiswa kwezvinodhaka kana zvinetso mumasangano ehukama. Musikana muduku akadaro uyo anotaura naye iyo NOS nhau zvinogona kuuya zvinowanzoitika mumunda. Uye saka munhu wose akaita pee uye chinhu chose chakasarudzwa zvakare.
Geenstijl akakwanisa kuzivisa kuti Gökmen Tanis angangodaro anokanganisa Moroccan iyi firimu kuti zviite kuti zvive nyore. Ndiani anoziva, asi ndiani anondiudza kuti yakanga isati yamboita? Chero mamiriro ezvinhu, iwe haufaniri kufunga kuti hurumende iri kuisa nyaya dzakadaro. Izvo hazvisi nyore; izvo hazvigoneki. Icho chirongwa chokufunga uye icho chinofanirawo kurambidzwa.
Vakafa uye vakakuvara nguva dzose vechokwadi. Pashure pezvose, tinoona mifananidzo chaiye uye zvapupu zvechokwadi uye hama chaiyo. Hatitendi kuti hurumende nehurumende vanoita chinhu chakadaro kuti vanyarare. Aiwa, havaiti izvozvo kuti vafare; vanoita izvi kuti vakwanise kuramba vachiita basa remapurisa. Unonzwisisa here? "Hongu, asi iwe hausi kuzoita kuti vanhu vakafa vakuvadze?"Kana iwe uchikwanisa kuunza vanhu vane mamiriyoni e17 pasi pemapurisa emhirizhonga vasina hurumende?" Sei? Tarisa vhidhiyo iri pasi apa uye funga nezvezvinoitika kana ukashanda nevatambi, deep fakes en greenscreen techniques. Kana iwe uchibatanidza izvozvo nehuwandu hwehuwandu hwemashoko nekudzokorora kwenhema, ipapo munhu wose achazvidavira (ikozvino kodzero Joseph Goebbels).
Kwakanga kusina kuonekwa here kuona ma media makeras aigona kutevera manhunt akawanda zvakanyanya? Zvaiita sokuti vainyatsoziva kwavanofanira kuva. Oh zvakanaka. Kurara zvakanaka. Maziso akavharwa uye mitsipa yakavharwa. Baba varikuchengetedza zvakanaka.
Usakanganwa mazwi pasi pechinyorwa ichi uye Nyaya yapfuura kuverenga. Uye ramba uchivhota zvakadaro! Verenga pano nei!
Source chinyorwa listings: nos.nl, telegraaf.nl
Nzira iyo vhidhiyo vanogona kuita nhau dzefake nekubatsira kweAI (maitiro ekuchenjera)
Tags: 24 oktoberplein, akasungwa, aanhouding, arrestatie, mhuri yemutambo, Featured, vakasungwa, Gökmen Tanis, jihadist, jihadists, Utrecht
Rowald Krijthe akanyora kuti:
18 March 2019 pa 21: 00
Uye ov 66 maminitsi ......
18 March 2019 pa 21: 27
Icho chapupu Dhaniel Molenaar, chakataurwa naNOS, chakaita chidzidzo chinonakidza:
18 March 2019 pa 21: 35
Yunivhesiti yeUtrecht ine basa rakaipa kwazvo mune iyi psyop, ndinoda kuziva nezvenyengeri dzaDe Graaf vnv muzvirongwa zvekuona vana vana .. Pauw naJenek vangopinda
18 March 2019 pa 21: 43
Beatrice de Graaf saka ndiye nyanzvi munhau dzeGDR. Saka anoziva zvakawanda nezve Inoffizieller Mitarbeiter system muGDR. Saka amai vakarovedza uchapupu uhwu Daniel miller!
Muna 2004 akawana PhD yake kuUtrecht University nedzidziso pamusoro peGDR
18 March 2019 pa 21: 50
Zvechokwadi iwe uri nhengo yeClubs kunze kwekuti iwe haugoni kuwana nzvimbo iyo. Hungu, ndiyo iyo inoshanda mumagariro anowanzopomerwa pasi, inotungamirirwa nevanokuvadza vanyoro vevanhuwo zvavo. Vanhu vane ngozi. Uye panguva iyo yakanyarara kwazvo uye inodzora.
18 March 2019 pa 21: 56
Panewo zvakare ... saka wedzera zvose pamwe chete. Uye ona kuti ndiani ari kuzivisa kuAAD zvose AIVD neMIVD
Institutions for Open Societies (nheyo yemagariro)
nhoroondo yehukama hwepasi pose
ugandanga uye zvematongerwe enyika
TerInfo. Kuita hugandanga hukurukurirana mukirasi (2017-)
Kuchengetedza Europe, kurwisa vavengi vayo. Kuitwa kwekuchengeteka tsika muEurope uye mberi (ERC Consolidator Grant, 2014-2019)
Blueprints of Hope (NWO Kushandura Kwose, 2016-2021)
Vavengi veHurumende. Kuitwa kweNational Security State, 1945-2000 (NWO VIDI, 2009-2014)
Zvigandanga Munjodzi (boka reNIAS rokutsvakurudza, 2010-2011)
18 March 2019 pa 22: 29
Uyewo zvinonakidza ndezvokuti "nyanzvi yehugandanga" kubva ku20: 00 awa NOS nhau (10: 06 min.) Anonzi Jeanine de Roy van Zuijdewijn. Isu tose taona mazita evakuru ...
Nenguva iyo hanzvadzi yaEdwin de Roy van Zuijdewijn?
Jaline Bies akanyora kuti:
18 March 2019 pa 22: 38
Ndizvo zvandaifunga seyokutanga kufemerwa
18 March 2019 pa 22: 52
Icho chikwata chiduku chiri kuterera kune vazhinji, Minerva, Instituut Clingendael (bhaudet connection neClick).
Tinoramba tichidzokorora ...
18 March 2019 pa 21: 46
Zvechokwadi dzidzo yakanaka yevasori vemazuva ano, trolls uye spooks. Iyo miller zvakare inotaridzika zvakanaka uye isina hanya. Packs vanhu zvakanaka. Ideal spy material. Tumira iko kuNorth Korea nokuda kwekutsika mutsika, kana
purogiramu yekufambisa inoshandawo zvakanaka, inonzi 'kufamba'.
18 March 2019 pa 21: 33
Uye izvi zvinogona kutsanangurwa sei?
18 March 2019 pa 21: 52
Kukanganisa kuonga! Vanoti ipapo kana kuti zvinosuruvarisa zvakare kuita zvakanaka.
18 March 2019 pa 21: 18
"Pashure pekupfura muUtrecht, vanhu vanogona kuudza nezve Facebook kuti vakachengeteka. Basa racho rakazarura chinonzi Safety Check. Iyo ndiyo nguva yokutanga muNetherlands kuti izvi zvakaitika kune chimwe chiitiko muNetherlands.
Kana njodzi ikaitika, Facebook inogona kusarudza kutumira shoko rinokosha kuna ani zvake angave ari munzvimbo yenjodzi. Vashandi vanogona kubva vobva vavhara pfuti 'Ndine ngozi'. A zivo inobva yatumirwa kune shamwari dzose dzevashandisi.
Iko Facebook Safety Check yakashandiswa kare kuurayiwa muLondon, Manchester, Brussels, Berlin, Paris, Munich, Nice, Turkey neLas Vegas uye nenjodzi dzinongoitika dzoga dzakadai semasango emasango, madutu uye kudengenyeka kwenyika. "
Muchidimbu: vimba nheyo huru dze data uye uvimbe hurumende: nyorera nokukurumidza kuna baba kuti iwe wakachengeteka. Zvechokwadi, zvose izvi deta hazvishandiswi chero chimwe chinhu. Zvinongobatsira chete.
Ndinofanira kutaura nokutendeseka kuti handinzwisisi kuti mumwe munhu anoda kuva mapurisa, musoja, nezvimwewo. Ko ivo havana chavanozvimirira, vachifunga kuchenesa simba here? Havafungi kuti vari kutamba mumadhouse uye kuti vashandi vavo vari kunyangarika chete. Kwete, chaizvoizvo havakwanisi. Izvo ndezvekutamba mupurisa, musoja. Vanotarisira yunifomu uye havana hanya neHurumende iyo inochengetedza. Sorry Martin nokuda kwehurumende yezwi.
Vashandi vehurumende huzivikanwe hwako hahufananidzi nesunifomu yako. Nenguva iyo asi iwe haungambofungi chero chinhu chisina sunifomu. Hatigone, chokwadi, tine izvozvo. Ndinokutendai nekuchengeta Madurodam kuchengeteka.
18 March 2019 pa 21: 37
Chero mamiriro ezvinhu, iye zvino ave akakwanisa kubata chiitiko chaicho ... icho cha 8 uye 9 November chaingova mapeji
18 March 2019 pa 22: 10
Uyewo paVervoersmaatschappy Kreolis yaizivikanwa kuti chii chaizoitika nhasi. Yakabva yacheneswa neKreopolis
Zvinosuruvarisa kuti handigoni kuwana chinyorwa chakatumirwa pano.
Nguva dzose inowanikwa pakukumbira kwaMartin Vrijland
18 March 2019 pa 22: 13
@ mukakani mumasango, vatapi venhau muNetherlands zvirokwazvo vakuru vatungamiri vanoshanda zvakananga uye pasi pekutungamirirwa kwevashandi vekuchengetedza. Vane nhamba yevamwe voga uye vari nhengo dzeClub, hongu.
Izvo zvinoshandawo kune vazhinji vanyori 'vakakurumbira'. Kunyora ibhuku. Vanhu vakaipa, vanovanzika.
18 March 2019 pa 22: 57
Hapanazve mapurisa mumugwagwa. Kusagadzikana, kusachengeteka, nezvimwewo.
Zvinoita sokuti mari inoenda kune aya marudzi emakamuri.
@ zon ... isu tose tinotamba pamwe chete. Isu tose tinorigadzirisa.
18 March 2019 pa 23: 35
Ah Nieuwsuur anonyorera kuti nheyo yaive yakawanikwawo mune renault tsvuku. Saka hapana pasipoti iyi nguva, asi chinyorwa.
Chii chaangadai akanyora? Mhando yetsamba yokufuratira?
Ikuratidzwa inofanira kuenderera mberi!
18 March 2019 pa 23: 45
O, zvakanaka kuti Daan hake, 'zvinoshamisika masuo akazaruka' zvinoratidzika kuti masuo idd yakazaruka ndiyo iyo .. ramba uchindishamisika pandinoziva kupi kwaungawana iyo iyo inobatsira inobatsira uye zvinoita seyo yakazara navo ... mukomana muduku scripted terror nl
18 March 2019 pa 23: 48
Uye mumwe murume? "Hongu, iye akangoerekana afufurira"
Iwe unodzidza kuva wakanyanyisa kunakisa pachikoro chekuita cheAIVD?
11: 25 chapupu chapupu Nicky van Grinsven
18 March 2019 pa 23: 57
19 March 2019 pa 11: 38
Uyu mukomana zvirokwazvo zvirokwazvo akazonaka. Ndinofunga kuti vashomanana vangave vari mumamiriro ake ezvinhu.
tedsdam akanyora kuti:
19 March 2019 pa 10: 27
19 March 2019 pa 10: 47
Jaja de emo buidling ikozvino inopinda mukudarika kuitira kuti nyaya yacho ive yakakwana. Ndiyo mhizha, saka vhidhiyo vanogona kuzviunza uye vanogona kuratidza mifananidzo yehama uye vanogona kugadzira nekusimbisa nyaya yose.
19 March 2019 pa 11: 03
Ndine mubvunzo we1 nokuda kwako Martin,
Chii chinoitika kune vanhu vane hanya vakaita semudzidzisi webhola?
Nokuti anofanira kunge akadzidziswa ipapo uye vanhu vanofanira kumuziva, ndinofunga.
Kana kuti munhu wezvokufungidzira here?
19 March 2019 pa 11: 18
Unogona kuva munhu chaiye (imwe-nzira tikiti kuWaikiki Islands), asiwo haingagoni kuva chaiye. Ihama uye zvapupu zvatinosvika pakuona paTV zvinoratidzwa paTV. Kana kuti pane: vhidhiyo vari kutungamirira munyaya uye vanogona kuita nekuputsa zvose. Isocial media media yakagadzirira kudzivirira nyaya yacho.
19 March 2019 pa 11: 43
Ok zvakajeka uye kuvonga nekuda kwekupindura kwako.
Ndine ruzivo rwakanyanya pamusoro pemamiriro ezvinhu ne (anenge asina kugadzikana mupfungwa) angafungidzirwa. Ndiye iye ari shooter mumamiriro ezvinhu akanga agadzirirwa mberi here? Kana zvakadaro, vakamutora sei? Akanzwa manzwi mumusoro make here? Kungofungidzira. Chero mamiriro ezvinhu, chero mamiriro ezvinhu ari mune zvekushanda kwepfungwa iyi, ndiye aiva munhu akasarudzwa aidiwa nokuda kwe "kurwisa" kuti pakupedzisira abudise mapurisa kuburikidza nemitemo.
19 March 2019 pa 11: 36
Iwe unogona kuita vanhu vanoda kukurumidza kushandisa zvinodhaka kana mishonga vanoita zvinhu zvepenzi.
Hatizivi zvechokwadi kana iyi ndiyo nyaya.
19 March 2019 pa 12: 32
Ikozvino maitiro apamusoro ekunyengetedza munhu ari kure kuti aite chiito chegandanga, somuenzaniso. Uye kuti vanoziva zvechokwadi kuti zvichazogumawo nechiito chichavabatsira. Ichokwadi kuti zvakakosha kugumbura munhu ane zvinetso zvepfungwa.
19 March 2019 pa 11: 42
Vari kuuya sei nekutya?
19 March 2019 pa 11: 50
19 March 2019 pa 12: 15
Mubvunzo wokuti hugandanga hunobatanidzwa here kana husingaiti hunogona kuita kuti zviito zvehurumende, kusungwa kwemunhu anokanganisa, uchapupu, nezvimwe zvakadaro zvakagamuchirwa zviri pamutemo. Murengeti 'akanaka' achaziva kuti, kukwezva. Uye zvechokwadi kutungamirira vanhu. Yeuka kuti kuchavawo nemasarudzo mangwana. Ndinoshamisika kana kuchange kune vazhinji veMafungiro, kana zvakasiyana?
19 March 2019 pa 12: 39
Isu We Jihadist inoda kuidzwa pamberi pedare reSharia!
MuUslam, mutemo wemhosva unonyanya kuvanzika mune zvakasikwa. Kuuraya, somuenzaniso, kunorangwa nechirwere chekufa, asi hama dziripo dzevakasarudzwa dzinosarudza kana chirango ichi chiri kunyatsodiwa kana kuti chinogadziriswa nechifuro. Nhamba yemari yakadaro inotsanangurwa nekukurukurirana pakati pemapato. Kuuraya ropa kana kukudzwa kunorambidzwa.
Squenzy akanyora kuti:
19 March 2019 pa 13: 51
Chimwe chakandirova zuro kunyanya nezvemashoko e6 awa paRTL ndechokuti zvakanyanya kufungidzirwa zvakabhadharwa mus Mosque muUtrecht. Izvi zvaizovharwa pakarepo apo zvakaparidzirwa kuti kupfura kwaizoenderera mberi. Kubvunzurudza nemutungamiriri we musangano we blabla. Iwe unorevei kugadzirisa? Kupindura zvakanaka kune pfungwa dzehuwandu hwekuti vanhu vanoita zvekubatanidza nekupfura muNew Zealand. Izvi hazvina kufanana kune mumwe nemumwe, asi ndezvekuedza kupindura pfungwa dzevanhu. Sei uchivhara musikiti zvakare nokuti kune kuuraya kunoitwa kune imwe nzvimbo muguta? Kubatana kwacho kunonzwisisika. Ndeipi nyika inorwara.
« Terrorist kurwisa 24 Oktoberplein muUtrecht, inotyisa munyika yose!
Vakafa vekurwiswa muUtrecht vanoratidza kuti haikwanisi kuva PsyOp? »
Total Visits: 11.690.204